Ireo mpampiasa ICloud dia afaka nahazo hatramin'ny 4TB niaraka tamin'ny Apple One | Vaovao IPhone
Ireo mpampiasa ICloud dia afaka nahazo hatramin'ny 4TB niaraka tamin'i Apple One
Alex Vicente | | iCloud, Apple products
Apple One dia navotsotra latsaky ny herinandro lasa izay. Serivisy "all-in-one" an'ny Apple izay misy Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade ary iCloud ao amin'ny firenentsika, hamela ireo mpampiasa iCloud hanana tahiry 4TB. Amin'izany fomba izany dia hanitatra ny 2TB izay i Apple One dia manana fetra miaraka amin'ny iray amin'ireo famandrihana.
Ny drafitra telo an'ny Apple One dia mamela ny mpisoratra anarana hananana 50GB, 200GB na tahiry 2TB miankina amin'ny drafitra nofidiny. 50GB ho an'ny € 15 isam-bolana, 200GB ho an'ny € 19,95 € modality ary farany ny 2TB miaraka amin'ny famandrihana € 29,95 isam-bolana.
Araka ny pejy fanohanan'i Apple, izay azonao jerena ato rohy mitovy, ireo mpanjifa na mpampiasa mila fitahirizana betsaka noho izay omen'ny iray amin'ireo famandrihana telo azo atao, dia mety mividy mitahiry fanampiny mitokana. Midika izany fa mety hahatratra ny famandrihana lafo indrindra hahatratra 4TB fitehirizana iCloud.
Rehefa avy misoratra anarana amin'ny Apple One ianao dia afaka mividy tahiry iCloud bebe kokoa raha mila izany ianao. Amin'ny drafitra fitehirizana roa, iCloud sy Apple One, afaka mahatratra 4TB fitehirizana ao amin'ny iCloud ianao.
Midika izany Ireo mpampiasa Apple One dia afaka manambatra ny famandrihany amin'io serivisy io miaraka amin'ny famandrihana fanampiny avy amin'ireo izay azo avy amin'ny iCloud toy ny 50GB fanampiny na 200GB fanampiny afaka mahatratra ireo 4TB fitehirizana rehetra. Ny vidiny manontolo dia tsy iza fa ny famandrihana Apple One miampy ny vidin'ny fisoratana anarana iCloud voafantina.
Ity dia vaovao tsy isalasalana fa vaovao lehibe ho an'ireo izay, ohatra, mila 300-400GB fitehirizana iCloud ary te hanana Apple One. tsy mila mandoa ny famandrihana efa ho 30 € isam-bolana izy ireo Fa kosa, afaka nandoa ny € 19,95 + ny € 2,99 izay onenan'i Apple amin'ny famandrihana 200GB iCloud izy ireo.
Etsy ankilany, ireo izay manana ID Apple misaraka amin'ny haino aman-jery sy iCloud, dia afaka mampiasa ny kaonty roa amin'ny serivisy Apple One iray ihany fa tsy misy safidy hanambatra tahiry amin'ny fomba mitovy. Amin'ireto tranga ireto, rehefa misoratra anarana amin'ny Apple One ianao, ny serivisy fitehirizam-bokatra dia manolo ilay efa anananao ao amin'ny kaontinao, araka ny fanazavan'i Apple ao amin'ny antontan-taratasy:
Raha efa manana serivisy fisoratana anarana iCloud ianao ary miditra amin'ny serivisy iCloud nomen'ny Apple One miaraka amin'ny Apple ID izay nanana izany drafitra famandrihana izany, ny tahiry tafiditra ao amin'ny Apple One dia hisolo ny serivisy misy ary ny vola mifanaraka amin'izany dia haverina mifanaraka amin'izany.
Manazava ireo tranga samihafa ihany koa ilay antontan-taratasy rehefa misy drafitra fitehirizana marobe eo amin'ny iCloud sy Apple One.
Raha manolotra tahiry betsaka kokoa noho izay efa misy amin'ny drafitra iCloud ankehitriny i Apple One, nofoanana ny fitehirizana ankehitriny ary naverina ny vola namboamboarina. Ny fitehirizana azo atao dia ny an'ny drafitra Apple One voafantina.
Raha toa ka mitovy amin'ny efa anananao ao amin'ny drafitra iCloud anao ankehitriny ny tahirinao Apple One, Mandritra ny vanim-potoana fitsapana ny serivisy dia hotehirizina ny fitahirizana ny drafitra iCloud sy ny drafitra Apple One. Rehefa tapitra io fe-potoana io dia nofoanana ny serivisy iCloud ary tazonina ny fitehirizana ny serivisy Apple One.
Raha toa ka kely noho ny drafitrao ankehitriny ny tahirinao Apple One, ny drafitra fitehirizana roa dia hotehirizina. Ireo izay te hampidina ny toerana fitahirizany ary hijanona irery miaraka amin'i Apple One, dia tsy maintsy manafoana ny fisoratana anarana iCloud.
Ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana izay ao anatin'ny drafitra fitahirizana fianakaviana, Izy ireo dia afaka mividy toerana fanampiny misaraka ho azy ireo na hanao an'ity habaka ity ho an'ny mpikambana ao amin'ny drafitry ny fianakaviana Apple One na ny drafitra Premier. Raha mila fitahirizana bebe kokoa ny vondrona ankohonana iray manontolo, ny mpikambana izay nanakarama Apple One dia afaka manitatra azy hatramin'ny farany feno naneho hevitra momba ny fitehirizana 4TB ao amin'ny iCloud
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Ireo mpampiasa ICloud dia afaka nahazo hatramin'ny 4TB niaraka tamin'i Apple One